တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသည့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းများကို ရေပူအမြဲတမ်း စစ်ဆေးရေး စခန်းမှ ဖမ်းဆီ?? - Yangon Media Group
တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသည့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းများကို ရေပူအမြဲတမ်း စစ်ဆေးရေး စခန်းမှ ဖမ်းဆီ??
မန္တလေး-မူဆယ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ပြည်တွင်းသို့ တရားမ ဝင်သယ်ဆောင်လာသည့် ကျပ်သိန်း ၅ဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို ရေပူအမြဲ တမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်းမှ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
သြဂုတ် ၄ ရက်က ရေပူအမြဲ တမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်း ပူးပေါင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ် လျှောက် တရားမဝင်အကောက် ခွန်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကို တားဆီးထိန်းချုပ်ရန် စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်စဉ် ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးအားစစ်ဆေးခဲ့ရာမှ တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသည့် LED Light 30၊ Solar Battery ၉၈ခု၊ H- EVD ၁၈ဝ နှင့် Car Multim- edia Player ၁၂ဝ ခု အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ခရီးသည် ကားတစ်စီးကို ရှောင်တခင်စစ်ဆေး ခဲ့တဲ့အခါမှာ သယ်လာတဲ့ပစ္စည်း တွေက အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်း တွေဖြစ်နေတယ်။ တရားဝင်စာ ရွက်စာတမ်းအထောက်အထား မတင်ပြနိုင်တဲ့ LED Light၊ Solar Battery၊ H-EVD၊ Car Multimedia Player တွေကို ဖမ်းဆီးမိတာပါ။ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တန်ဖိုးက ခန့်မှန်းငွေကျပ် ၅၂ ဒသမ ၂ သိန်းခန့်ရှိပါတယ်”ဟု သြဂုတ် ၅ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် တရားမဝင်အကောက်ခွန်မဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို တားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တွင် မရမ်းချောင် အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်း၊ ရှမ်း ပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) သိန်းနီမြို့နယ်တွင် ရေပူအမြဲတမ်းစစ်ဆေး ရေးစခန်းတို့ကို ဌာနဆိုင်ရာပူး ပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပြီး သြဂုတ် ၄ ရက် တစ်ရက်တည်းတွင် ရေပူအမြဲတမ်းစစ်ဆေး ရေးစခန်းမှ တားဆီးမှုနှစ်မှုဖြင့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ်သန်း ၅၄ ဒသမ ၂ သိန်းခန့်၊ မရမ်းချောင် အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်းမှ တားဆီးမှုနှစ်မှုဖြင့် ခန့်မှန်းတန် ဖိုးငွေကျပ် ၃၇ ဒသမ ၃၆ သိန်း ခန့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် - မြို့သစ် - ကံပြား - မကွေး လမ်းပေါ်ရှိ စလေချောင်းတံတား တည်ဆောက်နေမှု သြဂုတ် ၉ ရက်တွင်
ပြင်သစ် အက်ဖ်အေ ဥက္ကဋ္ဌကို တိုက်စစ်မှူး ဘင်ဇီမာ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် အတွင်းက အလယ်တန်းကျောင်းခွဲအား အခြားရွာသို့ မပြောင်းရွှေ့ရေး ဆင်ရောက်ကုန်?
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေး